iPad Air - News iPhone | Vaovao IPhone
iPad Air Io no anarana nomen'ny Apple ho an'ny iPad fahadimy. Fitaovana miaraka amin'ny Chipset A7, ny iPad Air dia mampihena ny hateviny amin'ny 20%, mandray ny volavolan'ny iPad Mini ary mampihena ny lanjany hatramin'ny 453 grama nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fizakantena mitohy maharitra 10 ora. IPad Air dia misy amin'ny loko volondavenona na alimina ao anaty lamina 16GB, 32GB, 64GB ary 128GB, miaraka amin'ny LTE na Wi-Fi ihany, izay 479 euros ny vidin'ny kinova fototra indrindra.
Ming-Chi Kuo, mpandalina, dia namoaka torolàlana vaovao momba izay ho hitanay amin'ny taona ho avy amin'ny resaka efijery ho an'ny ...
Ahenao ny isan'ny kojakoja ilainao entina miaraka amin'ny iPad Pro na MacBook fa azonao antoka fa vitanao daholo izany ...
Eto ny iPad Air 4 vaovao ary lazainay aminao ny vaovao lehibe sy ny fiheverana voalohany izay ...
ny Angel Gonzalez hace 6 volana .
Ny 15 septambra lasa teo dia niara-nanatrika antsika i Apple hanolotra ny Apple Watch Series 6 sy SE vaovao ...
ny Toni Cortés hace 7 volana .
Amin'ity indray mitoraka ity dia efa nahazo ny faminaniany i Jon Prosser. Manomboka anio dia afaka manafatra ny iPad Air vaovao ianao ...
Tsy fantatsika raha hadisoan'ny sampan-draharahan'ny fitantanana Best Buy izany na tena manana ny azy rehetra ...
Androany, izay rehefa aseho amin'ny fomba ofisialy ireo maodely iPhone 12 dia mila miresaka momba ...
ny Luis Padilla hace 7 volana .
Ny keyboard dia efa nanjary fitaovana ilaina amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa iPad, ary ankehitriny ...
Rehefa nandao ny laharan'ny iPad Air i Apple, taorian'ny fanombohan'ny taranaka faharoa tamin'ny 2016, dia tsy nisy na inona na inona nahatonga antsika hieritreritra ...
Tamin'ny hetsika tamin'ny volana lasa dia nanangana vokatra vaovao i Apple, ao anatin'izany ny iPad Air 4. One ...